Iialbham ezivela kubaculi abaphambili bayanyamalala kumculo weapile: ngaba sisiphene okanye izilungiso zobuchule?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iialbham ezivela kubaculi abaphambili bayanyamalala kwiApple Music: ngaba yimpazamo okanye ziingqondo ezinobuchule?
Iialbham ezivela kubaculi abaphambili bayanyamalala kwiApple Music: ngaba yimpazamo okanye ziingqondo ezinobuchule?
Ngokuka-Apple Music ababhalisile okwangamalungu eReddit , Kukho imicimbi ephambili nge apile Umculo. Iialbham azikho kwezinye iiprofayili zamaGcisa nangona zivela kwiiNgoma eziPhezulu nakwiThala leencwadi. Umzekelo, kwiReddit, ilungu eligama linguStarGrouchy 7301 labhala, 'Umzekelo ukuba uya kwiLady Gaga kunye nepos iphepha lomculi i-albhamu' yeChromatica 'ilahlekile, ukanti' Imvula iphezu kwam 'isadwelisiwe kwiiNgoma eziPhezulu kwaye idlala ngokwesiqhelo. Ukuba uzama ukufikelela kwiphepha lealbham kwingoma ibonisa isihloko sealbham kunye nomsebenzi wobugcisa ongwevu. Ayisiyiyo le albhamu kuphela, ii-albhamu ezimbini zokuqala zeSpice Girls azikho kodwa zilandelela ezo albhamu zisadlala kwiiNgoma eziPhezulu. UFlorence noMatshini, iSia, Destiny & Umntwana naye. Ndizongezile ezi albhamu kwilayibrari yam kwiinyanga ezidlulileyo kwaye zisafumaneka kwaye zidlala kakuhle. Ndiyathemba ukuba le yinto nje yethutyana kwaye ayongxaki enkulu, mhlawumbi inxibelelene nemicimbi yeseva abantu ababenayo ngaphambili? '
Iialbham ezaziwayo ziyanyamalala kwiApple Music: bug okanye ii-algorithms ezimdaka?
Elinye ilungu leReddit labhala lathi, 'Enkosi Thixo andindim ndedwa onamava oku. Oku kwandenza ndakhathazeka. Ndijonge amagcisa anjengoTaylor Swift, uBillie Eilish noLady A. Bonke balahlekile kwiialbham kunye nee-singles. Kwaye elinye iposti lathi, 'Kubonakala ngathi kuya kusiba mandundu njengoko ii-albhamu ezininzi ziyanyamalala kubaculi endibalandelayo. Ndiyathemba ukuba iApple iyakonyusa ukulungisa oku njengoko kukhokelela ekubeni abantu bakholelwe ukuba ezi albhamu ziyasuswa. '
Ababhalisi beApple Music ngamaxhoba ebug okanye i-sloppy algorithms
Enye ingxaki ejongene nababhalisi boMculo we-Apple kukuba eminye yemifanekiso ye-albhamu eboniswe yi-Apple & apos; s usetyenziso lomculo aluchanekanga. Kumzekelo omnye, ifunyenwe yi9to5Mac , uguqulo olwenziwe ngokutsha lweTaylor Swift kunye neapos; s 'Aloyiki' icwecwe libonisa umsebenzi wobugcisa ovela kwinguqulelo yoqobo ye-LP ngempazamo. Kweminye, lo mbandela uya ukhula ngakumbi nangakumbi. 'Kubonakala ngathi kuya kusiba mandundu njengoko ii-albhamu ezininzi ziyanyamalala kubaculi endibalandelayo, utshilo omnye umbhalisi we-Apple Music.
Mhlawumbi umsebenzisi weReddit ohamba ngesiphatho 'heyyoudvd' wayenenkcazo ebalaseleyo yokuba kutheni kubonakala ngathi ezinye ii-albhamu ziyanyamalala apile Umculo. Kwiposi ende wabhala, '... I-Apple ihlala ibandakanya ii-Deluxe editions, i-remasters, kwaye iphinda ikhuphe kwi-discography ephambili yomculi, xa eyona discography iphambili kufuneka ibandakanye ukukhutshwa kwasekuqaleni. Zonke iiyantlukwano kufuneka zikwicandelo elahlukileyo.
I-Apple Music ngokubanzi ibinemicimbi emininzi kunye nezinye iinguqulelo kunye nokukhutshwa okuninzi, apho unokukhuphela khona i-albhamu, iApple Music iya kudibanisa ialbham nakolunye uhlobo lwento enye, kwaye ke xa uye kujonga ialbham. Iyiphatha ngokungathi awunayo ialbham.
Kungenxa yoko le nto abantu bekhalaze malunga nee-albhamu ezahlulayo okanye ezokulahleka. Ikhathalogu ye-Apple Music iyamdaka kwaye ii-algorithms ezifanayo azihambi kakuhle, oko kuthetha ukuba uhlala ukhuphela i-albhamu ngqo kwi-Apple Music, kwaye emva koko iphatha loo albhamu ngokungathi awunayo.
Uza kubona oku kwiiFavorites kunye noLuhlu lokudlala kwakhona. Uninzi lweengoma ziboniswa ngokungathi awunazo. Cinga ngaloo nto. Iingoma zakho ezidlalwa kakhulu zango-2020 zihlala ziboniswa ngokungathi awunazo. Inokwenzeka njani loo nto? Kungenxa yokuba ukhuphele ingoma X, wayidlala kakhulu, uApple wayongeza kuLuhlu lwakho lokudlala kwakhona, emva koko uApple Music wayithelekisa nokukhutshwa ngokwahlukileyo kwengoma (okt.Upapasho lweDeluxe okanye iNgcaciso okanye iiHits ezinkulu okanye EP okanye eNye), kwaye ke xa ujonga ingoma oyikhuphelileyo, icinga ukuba awunayo le ngoma, kwaye uyikhuphele kwakhona (ngelo xesha unezimbini zazo).
Yiloo nto endithetha yona ngokungcola.
Ikhathalogu yeApple Music iphazamisekile kakhulu kwaye ifuna ukucocwa. '
Yintoni enomdla kukuba abanye abasebenzisi be-Apple Music ngoku baxela ukuba ii-albhamu ezilahlekileyo ziqala ukuvela kwakhona kwiApple Music app. Oku kuyabonakala ngathi kunika ukuthembeka kwithiyori ethi 'heyyoudvd' ibikhuthaza.
lg g2 sd ikhadi slot
I-iphone 11 pro max yokutshaja izibuko
Isicwangciso sosapho seSpotion Premium sihlaziywa ngento ekudala iceliwe
I-Telltale & apos; Umdlalo weZihlalo zobukhosi Isiqendu 1: Intsimbi esuka kwiqhwa ngoku isimahla kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS
Xa kuthelekiswa noMncedisi kaGoogle, uSiri ufumene amanqaku amabi kakhulu kuvavanyo lwamva nje
Iifowuni ze-Samsung ezisebenzisa i-Android 10 zilahlekelwe yinkxaso ye-Daydream VR
Iapp yeApple yemozulu ifumana uyilo olutsha kunye neemephu zemozulu nge-iOS 15
Ezona zikhuseli zibalaseleyo ze-Apple iPhone SE-zihlaziyiwe ngo-2021